19 October, 2013 23:58 | QEERROO
19 October, 2013 23:58
Posted on October 19, 2013 by Qeerroo
Baaa Wal Irraa Qooddachuun, Humna Taa Jiraachuu Keenya Mirkaneessa
Y.G(2005) | Onkololeesa 18, 2013
Sochiin Qabsoo Oromoo mirga abbaa Biyyummaa deeffachuuf gama hundaan gaggeeffamaa jiru, hara sadarkaan inni irra jiru akka gaaritti kan hubateef, dhalli Oromoo kan yeroo kamirrayyu caalaa, akka waliiif birmachuu qabu kan nu akeekudha. Dhiheenya kana Ilaalchi lama mooraa qabsoo Oromoo keessatti ifatti of haa labsu malee, hara , Ilaalchi kun odoo hin jaallannee diinni mataa isaa gama tokkotti luucceessaa jiraachuu qabatamaan kaasuutu dandaama. Diinni adda duraa wayyaanee fi kanneen gabroonfattoota kaleessaa, Biyya alaa sochiin taasisaa jiran, Ilmaan Oromoo gara kamitti oofaa akka jiran, walitti himuun barbaachisaa miti.
Hiraarrii fi mirga dhablee tauun yennaa hammaatu, kan miidhaan irra gau maal akka murteeffatu wal hin gaafannu. diinni keessaa fi alaan dhabama keenya wayita hawwu, dhabama koo dhiheessuuf waliin tirtiruun, adeemsa siyaasaa keessa kan jiru natti hin fakkaatu. Yoo dhiibbaa jiraateen alatti. Waan maraafu, dhalli Oromoo odoo hin jaalanne , baaa wal irraa qooddachuu qabu, haalaan heddummaachaa jiraachuu hubachuun barbaachisaadha. wal malee furmaati akka hin jirrees qalbeeffachuun gaari. Sochiin kana booda nu barbaachisu, kan taaanii wal irratti ialaalan yk maaltu na dhibeen kan callisanii bira taran taaa hin jiru. keessaa fi alaan, bakka jiranitti akka nama tokkottis taee , akka gamtaatti wanni waliif baaa qooddannu hedduudha.
Addatti beektoota keenya Biyya keessaa fi alaa irraa kan eegamu. Odoo hin jaallannee dhala Oromoo Addunyaa kana irra bakka fedheyyuu haa jiraatu, shira Oromiyaa haalaan hudhaa jiru kana keessaa baasuuf, tattaafii mataa isaanii taasisu qaba. Addatti kanneen hojiilee gara garaan , dhaabbilee edila adduynaas tauu kanneen biro keessa jiran yk hojjatan, adeemsa wayyaanootaa Ummata Oromoo bara baraan cabsuuf shira gaggeessan kana hubachiisuu fi haala kana irratti maaltu hojjatamu akka qabu, mariachuu qabu jedheen yaada.Qabxiileen kaasu, kanuma hundumtu hubatu garuu callifnee ilaaluun kan nu irra hin jirre, boruu rakkoo keenya isa hamaa wareegama ulfaataa nu gaafatu tau irraa ammumaa irratti hojjachuun akka nu barbaachisu hubachiisuufi.
BA’AA WAL IRRAA QOODDACHUUN MIIDHAMA HANQISA..docx